Waa maxay habka saxda ah ee lagu qiimeeyo loona abuuro gadaal dib-u-eegis leh qalabka SEO-ga online-ka ah?
Looma baahna in la yiraahdo in ay ka muhiimsan tahay in la xakameeyo guga-nadiif ah shabakadaada ama waqtiga blogka. Xirfadlahaaga xiriirka ahi waa waxa ugu muhiimsan ee lagu fulinayo daryeel gaar ah. Waxaan loola jeedaa in la socdo kormeer sax ah markasta oo aad dib u abuurto qalabka internetka lagu baaro waa inay noqotaa WAA INAAD ku saabsan istaraatijiyaddaada guusha mustaqbalka. Dabcan, haddii aadan rabin inaad lumiso koontarool oo aad dhaawacdo horumarkaaga hadda ku jira SEO leh dhowr arimood oo qalad ah oo caddaynaya inay yihiin sunta sunta ah. Aan la kulanno - kormeerka boggaaga xiriirka ah ee gacantaada had iyo jeer wuxuu noqon doonaa waqti wakhti badan oo xaddidan oo la maareeyn karo, ugu yaraan istaag iyo joogto ah. Halkan waa marka aad la kulmi doonto baahi weyn si aad u sameyso nidaamkan qayb ahaan si otomaatik ah iyadoo la adeegsanayo qalabka software-yada khaaska ah. Iyadoo la tixgelinayo in badankoodu ay heli karaan helitaanka furan, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad ku qiimeyn lahayd xiriiriyahaaga xiriirka iyo nadiifinta feejignaanta. Waxaana jira fursado badan oo kala duwan oo kaa caawin kara inaadan abuurin oo kaliya dib u qaabeyn qalab otomaatig ah oo internetka ah, laakiin kormeere falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan waxqabadka guud ee SEO, iyo sidoo kale horumarkaaga hadda jira ee isku xirnaanta isku xirka.
Waa kuwee faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee lagu falanqeynayo falanqaynta SEO-ga qotodheer markaad abuureyso qalab online ah? Si fudud u dhig, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku dhufato saamaynta dambi-celin kasta oo la dhigo website-kaaga ama blogka, iyo sidoo kale wax-qabadka wadajirka ah ee SEO-ga kaas oo si fudud loogu labalaabi karo ama xitaa saddex laab. Sababtoo ah, maxaad uga maqnaanaysaa fursad wayn? Isku day inaad wax walba u habayso habka saxda ah adigoo isticmaalaya qalabka saxda ah ee saxda ah - oo ka dhig wax waliba si sahlan.
. Xaqiiqdii, waxaan si joogta ah u shaqeynayey inaan ku raaxeysto kobaca guud ee taraafikada webka, iyo sidoo kale guulo isdaba joog ah ee dhibcaha PageRank. Dabcan, maanta waxaa jira helitaan ballaaran oo ah barnaamijyo isku xira duwan oo isku xira si loo abuuro backlinks iyo qalab internetka lagu baaro si loo kormeero joogteynta joogtada ah.
Haddii aanan laheyn xiriirkayga aan ku qiyaaso miisaanka, iyada oo guud ahaan waxqabadka guud ee SEO, iyo walxo kasta oo ah jaantuska gadaal-gadaal - qiimeynta raadinta boggeyga aan marnaba horay u sii horumarin doonin, waa inaan qiraa. Iyada oo tixgelineysa xalka ugu fiican ee isku xirka otomaatiga, cilmi baarista tartanka, falanqaynta iyo soo jeedinta degdega ah, waxaan ku talinaynaa in aan isku dayo qalabkan soo socda: Qalabyada Websaytka Google (oo ku habboon xiriirka cusub, si xor ah oo macquul ah wax ku ool ah), Ahrefs (daraasad dhamaystiran oo ku saabsan xidhiidhada / + qiimeeyaha jebinta jebinta jebiyey), Falanqaynta Nadaafada (xog-ururin badan), Semrush (tijaabin leh fikrado tartan ah, nuqullo buuxa oo cayilan). Sidoo kale waxaad isticmaali kartaa qalab kasta oo kale sida Open Site Explorer (Moz), ama Qaylo-dhaanta Maqalka SEO Spider (nasiib darro ma aanan helin fursad aan isku dayno isticmaalka isticmaalka). Ka dib, waxa kaliya ee adiga kugu habboon inaad go'aansato Source .